Farmaajo oo bixiyay Amar saameyn ku yeelanaya Qaar kamid ah Wasaaradaha Dowlada iyo Gobolka Banaadir - iftineducation.com
iftineducation.com – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in la xanibay Akoonadii Qaar badan oo kamid ah Wasaaradaha Dowlada Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir ku lahaayeen Bangiga Dhaxe ee Soomaaliya.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed ayaa la sheegay in uu amar ku bixiyay in la xanibo Akoonada ay Bangiga dhaxe ku leeyihiin Wasaaradaha Xukuumada qaarkood iyo maamulka gobolka.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la xanibay akoono iyana Hay’adaha dowlada qaarkood ku lahaayeen Bangiyo iyo iyo akoono ka furan qaar kamid ah Xawalaadaha Madaxa banaan ee ka howlgala magaalada Muqisho.
Xanibaadan lagu soo rogay akoonada Wasaaradaha Xukuumada iyo Hay’adaha dowlada ayaa la sheegay in looga gon leeyahay si looga hortago in xatooyo hanti qaran la sameeyo inta lagu guda jiro kala gurka.
Madaxweynje Farmaajo ayey noqoneysaa talaabadii ugu horeesay uu qaaday, waxa ayna arimahan kusoo aadeysa xili Madaxweynaha cusub uu balan qaaday in si xoogan ula dagaalami doono musuq maasuqa.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxyabahii ugu xiisaha badna suuqa Facebook akhriso